REMEDY Fahasalamana * Ny fanarenana manokana indrindra eto an-tany
Antsoy ny REMEDY
Londres:+44 20 4525 0737
Singapour:+65 3158 6596
5* Fialan-tsasatra ara-pahasalamana
Mpandresy amin'ny ankapobeny: Famerenana amin'ny taona 2022. Fankasitrahana ny asantsika miavaka, ny taham-pahombiazana maharitra, ny trano sy ny sandany.
5 * Fialan-tsasatra tsara tarehy
Ny Fanafody Fahasalamana dia tsy fandosirana fotsiny amin'ny fiainana feno tebiteby, fahaketrahana, fiankinan-doha na faharerahana. Izany dia ny fiverenana amin'ny fiainana niainana tsara.
Izay haitraitra mikitoantoana mihaona amin'ny fahafahana fitsaboana. Toerana hifandraisana amin'ny zavatra lehibe kokoa noho ny tena. Fialofana manokana ho an'ireo manan-talenta, mamorona, sahy ary saro-pady mba hifandray indray amin'ny tenany. Toerana fanasitranana ara-tsaina sy ara-batana mahafinaritra.
Tongava amin'ny fo misokatra, ary miala hiova mandrakizay. Fanarenana misy tanjona izany. Toerana misy dikany. Ity no FANAZAVANA
Ny fandaharan'asa Remedy Wellbeing tena miavaka & World Class dia ahitana traikefa amin'ny fanarenana toy ny yacht manokana, fanjonoana lefona, fofonaina & fitsangatsanganana an-trano mankany amin'ny tany lavitra, feno amin'ny haitraitra 5*.
Mpandresy amin'ny ankapobeny: Rehab tsy miankina tsara indrindra 2022
Efa eo amin'ny toerana fantatrao ve ianao fa tsy maintsy miova ny fiainanao? Mitady fiadanana, fahafaham-po ary fahatsapana tanjona bebe kokoa ve ianao? Remedy Wellbeing dia misy hanampy anao hahita fahatoniana araka ny soatoavinao ambony indrindra, na inona na inona mety ho sanda ireo. Famoahana fitsaboana mirentirenty indrindra maneran-tany momba ny fahasalamana ara-pihetseham-po, ara-batana ary ara-tsaina. Ny Remedy Wellbeing dia manohana olana maro isan-karazany ao anatin'izany ny fiankinan-doha, ny fanahiana, ny tsy fahitan-tory, ny fahaketrahana, ny fahanterana, ny trauma, ny fitantanana lanja, ny famerenana amin'ny laoniny ny orthomolecular ary ny fampitsaharana ny fifohana sigara.
Fandaharam-pampitomboana ny fiainana
Ny fandoroana mpanatanteraka sy ny mpandraharaha matetika dia miteraka fanafody maharitra maharitra satria mampitombo ny fahatsapana mitoka-monina, tahotra, tebiteby, paranoia ary fahaketrahana. Ny havizanana ara-pihetseham-po miaraka amin'ny fihenan'ny fahaiza-manao, ny tsy firaharahiana, ny fifantohana malemy, ny fanomezan-tsiny ny tena ary ny tsy fahampian-torimaso dia soritr'aretina matetika.
Famerenana avy ao anatiny
Tongava amin'ny saina misokatra, ary miala hiova mandrakizay. Izany dia fanarenana miaraka amin'ny tanjona. Toerana misy dikany. Nahazo ny satan'ny Luxury Rehab, ary ekena noho ny vokatra miavaka. Mino izahay fa ny mifanohitra amin'ny fiankinan-doha dia ny fifandraisana. Fifandraisana amin'ny tena, amin'ny hafa, amin'ny tontolo iainantsika ary amin'izao rehetra izao.
Manampahaizana nahazo loka
REMEDY dia noheverina ho programa mandroso indrindra eran-tany. Tsy manaraka fitondrana 12 dingana izany. Ny fahasalamana sy ny fahasalamana maharitra dia mitaky fandaharan'asa fitsaboana manainga fanahy, mifanaraka amin'ny tsirairay miaraka amin'ny tsy firaharahiana izay tsy voalaza na takiana. Remedy dia mitarika ny mpanjifa hiaina fiainana araka ny soatoaviny manokana.
Mpanjifa iray: Programa iray
Ny Remedy Wellbeing dia mpanome fitsaboana tsy manam-paharoa amin'ny fitsaboana manokana ho an'ny fandoroana, ny fahaketrahana, ny fiankinan-doha, ny tebiteby ary ny olana ara-pahasalamana ara-pihetseham-po. Fitsaboana bespoke amin'ny trano fonenana miavaka sy toerana manokana miavaka indrindra eto an-tany.
15 Taona porofo ara-tsiansa
ny Ny fitsapana ADN manokana dia manampy amin'ny famaritana ny fitsaboana manokana ho an'ny tsirairay. Mitsapa ny tontonana misy fototarazo 69 izahay mitady famantarana ny fiankinan-doha, ny fikorontanan'ny fihetseham-po ary ny toe-tsaina ara-tsaina. Mamakafaka ny filaharana 300 mahery, ny neurotransmitters 24, ary ny hormones isan-karazany izahay mba hanamafisana ny fitsaboana amin'ny fitsaboana.
Famerenana amin'ny laoniny biochemical
Ny fitsirihana laboratoara natokana ho anay dia mampiseho olana toy ny tsy fifandanjan'ny asidra amino, ny tsy fahampian-tsakafo, ny hypoglycemic, ny areti-maso, ny havizanana adrenal, ny fahasalaman'ny tsinay, ny haavon'ny hormonina ary ny neurotransmitters. Ny fitsaboana dia manafoana sy manamboatra ny fahasimbana amin'ny atidoha sy ny vatana eo amin'ny sehatry ny sela ary hisorohana ny aretina sy ny aretina ho avy.
Luxury + Privacy
Nahazo ny sata 'Tsara indrindra Eran-tany'
REMEDY Wellbding dia nomena laharana voalohany tamin'ny taona 2022 avy amin'ny Worlds Best Rehab ary tsy isalasalana fa ny fialan-tsasatra manokana sy mihaja indrindra eto an-tany. Ny fandaharana dia mety ahitana fandaharana fampivondronana tsy manam-paharoa miaraka amin'ny mpanjifa iray sy ny fianakaviany noraisina tao amin'ny yacht manokana 125ft mba handeha an-tsambo amin'ny fitsangatsanganana mahagaga manodidina ireo nosy tsy misy mponina.
Ny fitsaboana Psilocybin, Ketamine Infusions ary Ibogaine ara-pitsaboana dia lohalaharana amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana ary voaporofo fa mahomby amin'ny fahaketrahana mahazaka fitsaboana, CPTSD, tebiteby ary fiankinan-doha. Our Luxury Tripnotherapy™ retrets dia tarihina ara-pitsaboana sy tantana ara-pitsaboana.
Mpandresy amin'ny Worlds Best Rehab 2022
Remedy Wellbeing dia nomena laharana voalohany amin'ny Worlds Best Rehab Magazine ary tsy isalasalana fa ny traikefa Rehab mahomby indrindra, manokana ary mihaja indrindra eto an-tany. Ny REMEDY no ahitanao ny mpiasa tsara indrindra, ny teknika fitsaboana faran'izay manan-danja indrindra ary ny fomba fiasa ara-tsiansa sy holistic mba hanohanana sy hanohanana ny marary amin'ny alàlan'ny metamorphose amin'ny famerenana amin'ny laoniny tanteraka.
Izay lazain'ny olona
“Miova ny fiainana”
"Namonjy ny aiko ity toeram-pitsaboana mahagaga ity. Tena matihanina ny mpiasa ary fantatro fa eo am-pelatanana aho. Tena tsy afaka misaotra ny ekipa rehetra ao amin'ny REMEDY aho tamin'ny fanovana ny fiainako. Tena nanampy ahy hahatakatra ny fiantraikan'ny sakafo mivantana amin'ny fihetseham-poko ny fanafody miasa. Misaotra REMEDY. Nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny fiainako sy ny orinasako ianao."
“Mamirapiratra. Inona indray no holazaiko. Nihevitra aho fa handeha amin'ny traikefa ratsy indrindra i Rehab ary tena natahotra aho. Hafa tanteraka anefa ny REMEDY. Tena nanampy ahy ny fandaharana an-tserasera ary avy eo dia namandrika REMEDY roa herinandro feno niaraka tamin'ny Fianakaviako aho. Tsy misy teny manazava ny fankasitrahako. Naverinao ny fiainako sy ny fianakaviako.”
“Avereno amiko ny fiainako”
"Avelako ny REMEDY androany vehivavy hafa tanteraka izay afaka mijery ny tenako amin'ny fitaratra, ary nanomboka tsy tia fotsiny aho fa fitiavana ny tenako. Izany dia miankina amin'ny mpiasa mahagaga. Tsy afaka manome tsiny ny toerana aho na ahoana na ahoana. Ny fitantanana dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fifandraisana amin'ny mpanjifa izay mitondra fiovana lehibe. Miandrandra ny fiainana indray aho"
“Fikarakarana sy matihanina”
"Amin'ny maha-Mpsikiatria voasoratra anarana sy manam-pahaizana manokana amin'ny fiankinan-doha, ny fikorontanan'ny sakafo ary ny fitsaboana trauma, dia tsy afaka manoro hevitra ny REMEDY Wellbeing aho. Ny mpiasa matihanina sy mahafeno fepetra dia manome mihoatra sy mihoatra ho fanohanana ny mpanjifa. Efa nanoro ny mpanjifako maromaro aho mba hitsaboana marary any amin'ny REMEDY ary hitohy. "
Ivon-baovaontsika, Hetsika & Fahalalana
Remedy Wellbeing dia faly mizara ny eritreritra amin'izao fotoana izao sy ny mpitarika ny indostria. Ny ekipanay dia antsoina matetika hoe "manam-pahaizana manam-pahaizana" ary antsoin'ny Governemanta, ONG, Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana ary ireo toeram-pitsaboana hafa any Eoropa sy Maneran-tany mitady hametraka, mampifanaraka ary manova ny politikan'ny fiankinan-doha sy ny fahasalamana ara-tsaina ankehitriny.
Ny bokikely mihaja
Nahazo loka Worlds Best Rehab 2022
Voaray ny antsipiriany
Mangataha ny kopiao
Henoy ny Podcast
Copyright © 2022 by Volania LLC, Inc. Zo rehetra voatokana.